Wiilka Gaddafi oo loo diiday inuu ka qeyb-galo doorashada madaxweyne - Bulsho News
Wiilka Gaddafi oo loo diiday inuu ka qeyb-galo doorashada madaxweyne
Guddiga doorashada Liibiya ayaa Arbacadii sheegay in Saif al-Islam Gaddafi, oo ah wiil uu dhalay hoggaamiyihii hore, isla markaana ahaa musharrax miisaan leh ee doorashada madaxtinimada ee lagu wado inay dhacdo bisha December, aanu u tartami karin doorashada.
Diidmada guddiga doorashada ayaa sii kordhinaysa qalalaasaha ku gadaaman codbixintan.
Qadaafi waxa uu ka mid ahaa 25 musharrax oo guddiga doorashada ay go’aan hordhac ah ku kala reebeen ilaa inta laga gaarayo hannaanka racfaanka ee garsoorka dalkaasi uu go’aan uga gaarayo, waxaana doorashadan markii hore isku diiwaangaliyay 98 musharrax.
Saif al-Islam Gaddafi ayaa dafiray inuu sameeyay wax khalad ah.
Musharaxa kale ee caanka ah, Khalifa Haftar, ayaa la sheegay inuu haysto dhalasho Mareykan ah, taasoo sidoo kale meesha ka saari karta musharraxnimadiisa.
Dad badan oo ku nool galbeedka Liibiya ayaa sidoo kale ku eedeeyay Haftar inuu galay dambiyo dagaal intii lagu jiray weerarkii Tripoli ee 2019-20, hase yeeshe wuxuu isna inkiray inuu heysto dhalashada Mareykanka iyo inuu geystay dambiyo dagaal.
Fallanqeyn sharci: Farmaajo ma hakin karaa awoodaha ra’iisul...
Ukraine’s doctors pushed to the limit by COVID-19...
Muhaajiriintii ugu badnaa oo ku dhintay xeebaha Liibiya
5-ta Halyeey Ee Jorginho Ku Taageersan Ku Guulaysiga...
Tahriibayaal ku geeriyooday marin biyoodka u dhaxeeya Ingiriiska...
Olole Nadaafadeed Oo Laga Fuliyay Cusbitaalka Guud Ee...
Blinken, on Colombia visit, says human rights accountability...
Qaali Guhaad: Farmaajo, Fahad iyo Kuwii Gabadheyda Dhibaateeyey...